Skagen, ebe Oke Osimiri Ugwu zutere Baltic | Akụkọ Njem
Monica sanchez | | Denmark, Nduzi, njem
Na mbara ụwa dum anyị nwere ike ịchọta ihe ịtụnanya dị ebube nke na-eme ka anyị na-atụ ụjọ, na-emeghe ọnụ anyị na mberede na obi anyị jupụtara na echiche efu. Ebe ọ bụla anyị lere anya, enwere ọnọdụ paradaịs ebe ịkwụsị njikọ ahụ na-adị mfe dịka mechie ma meghee anya gi.
Otu n'ime ebe ndị ahụ yiri ka e si n'akụkọ bụ obodo ndị njem nleta Skagen. N'ịbụ nke dị n'ọnụ ọnụ ugwu ugwu nke ala mmiri Denmark, oke osimiri ndị nwere aja na-enweghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ nke mpaghara ebe okpomọkụ, ebe mmiri nke osimiri abụọ na-asacha ya: Oké Osimiri Ugwu na Baltic, nke na-agbakọta na-eweta ihe ihe ngosi di egwu.
Dị ka a ga-asị na ọ bụ ndị enyi abụọ ji n'aka na-enweghị aka na-amagide ya, naOké osimiri abụọ a na-ebikọ ọnụ n'enweghị nsogbu.
1 Skagen, ọmarịcha obodo Danish nke ị na-agaghị echefu
2 Kedu ihe ị ga-eme na Skagen?
3 Ihu igwe nke Skagen
4 Skagen, ebe oke osimiri abụọ zukọrọ ... mana ha anaghị agwakọta
5 Kedu ka "esemokwu nke oké osimiri" si eme?
6 Ihe ị kwesịrị ịma tupu ịga Skagen
Skagen, ọmarịcha obodo Danish nke ị na-agaghị echefu
Naanị site na obodo a ka ị ga-aga lee ya, si Skagen. A hụrụ ya na ugwu nke Denmark, ọkachasị na mpaghara North Jutland. Ọ bụ obere obodo azu na-anabata onye ọ bụla chọrọ ịga leta ya.
Ruo mgbe na-adịbeghị anya, ọnụ ọgụgụ ya ebighi ebi, mana ntakịrị ntakịrị ọnụọgụgụ mmadụ na-abawanye, ọkachasị n'afọ ndị na-adịbeghị anya, n'ihi na ozugbo ị ji anya gị hụ obere ihe ịtụnanya a, ị gaghị echefu ya ọzọ.
Kedu ihe ị ga-eme na Skagen?
N'agbanyeghị oke mpaghara ya, ọ nwere ike ịnye ọtụtụ ndị njem nleta, n'agbanyeghị masịrị ha. Ọmụmaatụ:
Ihe ngosi nka nke Skagen: Ọ bụrụ n’ịchọ ịhụ nka ka eserese na eserese, ị gaghị eleghara ebe ngosi nka nka. E hiwere ya na 1908 na Brøndum Hotel. Ọ nwere ụlọ ihe karịrị afọ 1950 nke ndị ọrụ dị iche iche, dịka Anna Ancher ma ọ bụ Christian Krohg.
Puerto: ebe kachasị mma iji nweta azụ ọhụrụ, dịka a na-ere ahịa ya kwa ụbọchị. I nwekwara ike ịnọ n'otu n'ime ụlọ ya, nke a na-ese na agba odo mara mma.
Mile Råbjerg: na gburugburu obodo ahụ, e nwere ájá mmiri na-acha ọcha na mmiri fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri dị kristal. Nke a bụ paradaịs ebe ezinụlọ niile ga-enwe ọ enjoyụ na njem, ma ọ bụ tụgharịa uche na Råbjerg Mile, nke amara nke ọma dịka dune na-akpụ akpụ.
Cape Skagen: Mana ọ bụrụ n’ịchọ ịhụ nnụnụ ndị na-eri anụ ka ha na-eme ihe kachasị mma, ị ga-agarịrị n’ọgwụgwụ. Ihe oma eji ele anya bu ihe siri ike ichota, mana ebe a ka ichota otu: Skagens Odde.
Ihu igwe nke Skagen
Mgbe ị na-aga ebe ị na-amaghị otu n'ime ihe mbụ ị ga-eme bụ ịmata ihe ihu igwe ga-adị mgbe anyị dara n'ala. Na Skagen ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti -2ºC na February na 18ºC na August, ya mere, Anyị agaghị enwe ihe anyị ga - eme ma ọ bụghị iwere uwe na-ekpo ọkụ iji chebe onwe anyị pụọ na oyi, yana ụfọdụ nche anwụ karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga na October nke bụ rainiest ọnwa.
Skagen, ebe oke osimiri abụọ zukọrọ ... mana ha anaghị agwakọta
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị n'akụkụ a nke ụwa. Ihe Skagerrak Ọwara mmiri bụ ụzọ sara mbara nke kewara ebe ndịda nke ala mmiri Scandinavia (na Norway) na Jutland peninshula (na Denmark), na-ejikọ Oké Osimiri Ugwu na Oké Osimiri Baltic. Ọ bụ ebe akụkọ ihe mere eme hapụrụ akara ya: nke nwere ogologo 240km na ihe dị ka 80km n'obosara, enye ekedi akpan ebiet ke ini ekọn̄ ererimbot iba, karịsịa maka Germany, ebe ọ bụ otu n'ime ihe ndị kpatara ndị Nazi wakporo Denmark na Norway.
Kedu ka "esemokwu nke oké osimiri" si eme?
"Nsogbu nke oké osimiri" na-apụta mgbe otu n'ime ha abụọ pere nnu karịa nke ọzọ. N'okwu a, Baltic nwere mkpụkọ nnu dị ala karịa Oke Osimiri Ugwu, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu n'ihi nnukwu mmiri dị ọcha na-enye mgbe niile site na osimiri na-asọba n'ikperé mmiri ya.
N'ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị maka obere oghere ahụ dị na North Sea, nke a na-akpọ Skagerrak, na Baltic ga-abụ a gigantic ọdọ mmiri.
Ihe ị kwesịrị ịma tupu ịga Skagen
Dị ka anyị hụworo, Skagen bụ obodo oyi na-atụ ma nwee ọtụtụ ohere iji mee ka anyị nwee ezumike a na-agaghị echefu echefu. Agbanyeghị, anyị ga-eburu n'uche ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ njem anyị ka ọ gaa dịka anyị siri chee ... ma ọ dịkarịa ala. Dee ndụmọdụ ndị a ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla anya:
Njem site na Mee rue Septemba: N’ọnwa ndị ahụ, ị ​​ga-ahụ ebe nkiri ndị njem nlegharị anya.
Tinye maka Kaadị Ahụ Ike Europe (TSE): O doro anya, anyị anaghị atụ anya ibute mmerụ ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, mana ọ bụrụ na ọ ga-akara gị mma ịrịọ maka ya n'ihi ihe nwere ike ime.
Were akwụkwọ ọkọwa okwu na onye ntụgharị okwu: asụsụ ndabara ha na-asụ bụ Danish, ọ bụ ezie na ndị nduzi njegharị na-asụkwa Bekee. Ọ bụrụ n ’ị maghị asụ asụsụ, akwụkwọ ọkọwa okwu na onye ntụgharị nwere ike ịba uru.
Gbanwee euro maka ego mpaghara (Danish krone): n'ebe ụfọdụ ha ga-anabata euro, mana ọ ka mma ịghara itinye ya n'ihe ize ndụ wee jiri ego mpaghara ma ọ bụ iji kaadị zụrụ ihe zụta.
Nwee igwefoto mgbe niile: Iji chekwaa ihe ncheta gị ma weghachite ha ugboro ugboro mgbe ịlaghachiri ụlọ, dozie igwefoto gị maka ojiji.
Yabụ ugbu a ị marala ebe ị ga-esi gaa njem gị ọzọ: Skagen, Denmark.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Denmark » Ebe Oke Osimiri Ugwu zutere Baltic